Nohamafisiko tamin'izy ireo, hoy izy, fa taonan'ny fanantanterahana ny vina sy ny velirano ity taona 2022 ity ary misahana andraikitra lehibe amin'izany ny Governora. Betsaka ny ezaka efa vita. Mbola maro koa ny asa tsy maintsy tohizana sy ho tanterahana ka mitaky fanatsarana sy fanafainganana ny fomba fiasa izany. Fotoana izao hitondrana vahaolana sy hanitsiana izay lesoka. Ny vokatra na ny "résultat" ihany no andrasan'ny vahoaka amintsika. Koa tsy afaka mitavozavoza isika satria miandry antsika ny vahoaka Malagasy ary ny fampandrosoana entina dia tsy maintsy mipaka eny amin'ireo faritra sy distrika rehetra manerana ny Nosy, hoy hatrany ny tenany.
Legende: Ny fihaonana teo amin’ny filoham-pirenena sy ireo governora